Kairos: Gargaar Is-kaashato oo Ka Baxaya Boqortooyada - Gargaarka Musiibada ee Mucaawinada ah
Bogga ugu weyn/updates/Kairos: Gargaar Is-kaashato oo Ka Baxaya Boqortooyada
Laga bilaabo 2019/2020 oo hadda sii socota xagaaga 2021, bulshada rayidka ah ee adduunka ayaa markhaati ka ah naxdinta ugu weyn ee caasumadda neoliberal weli: COVID-19. Malaayiin dad ah ayaa ku dhintay kuna sii jiraya inay ku dhintaan masiibadan aan horay loo arag. Sida aafooyinka badankood, kuwa taariikh ahaan dulman uguna masuulka yar masiibadan faafa si kastaba ha noqotee kuwa ugu saameynta badan. Tirada dhimashada ayaa la barbardhigi karaa baaxadda nolosha ku dhimatay Dagaal kale oo Adduunka ah.
Da ’kastaaba wuu leeyahay kairos, daqiiqadahaas suurtagalka ah halka masiirka aadanaha iyo nolosha adduunku ku laalaado ugu yar dunta. Waxa aan dooranno inaan sameyno ama aanan sameynin xilliyadan fiidnimada ah waxay leeyihiin cawaaqibka ugu weyn. Giriiggii hore waxay lahaayeen laba erey waqti: chronos iyo kairos. Chronos ahaa / waa taariikh ama taariikh isku xigxigtay, halka kairos waxay muujineysaa daqiiqad run ah - waqtiga ficilka - waqtiga uurka. Sidoo kale, qalalaasaha, asal ahaan, waa isbeddel, daqiiqad ay waddooyin badan oo horteenna yaallaan, waana inaan kala dooranno jidka aan ku soconno. Zapatistas, sidoo kale, waxay na bareen wixii ku saabsan derbiga dillaac:
"Inta badan darbigu waa marquee weyn oo" HORUMAR "ku soo noqnoqda marar badan. Laakiin Zapatista wuxuu ogyahay inay been tahay, in darbigu had iyo jeer uusan joogin. Way ogyihiin sida loo dhisay, shaqadeedu maxay tahay. Way ogyihiin khiyaanadeeda. Iyaguna way yaqaaniin sida loo burburiyo.
Iyagu ma quud-darroodaan awood darrida iyo dardaaranka darbiga. Way ogyihiin in labaduba been yihiin. Laakiin hadda, waxa muhiimka ahi waa dildilaaca, oo aanu xidhnayn, inuu sii ballaadho. ”
Burburka, shakhsi ahaaneed iyo wadajirka ah, wuxuu u horseedi karaa horumar. Duufaannada, dababka, duufaannada, dhulgariirrada, iyo cudurrada faafa waxay sababaan dhibaatooyin aan la soo koobi karayn, halaag, iyo khasaaro sababo la xiriira xaaladaha bulsho iyo bey'adeed iyo cilaaqaadkeenna aan loo adkeysan karin ee aan la leenahay dadka kale iyo adduunka dabiiciga ah. Dhacdooyinkan xad-dhaafka ahi waxay daboolka ka qaadaan aafooyinka ka dhasha sinnaan la’aanta bulshada iyo dhaqaalaha ee hore u jirtay.
Waxaan joognaa Jasiiradda Turtle, ee loogu yeero "Mareykanka," waxaan dib ugu milicsaneynaa taariikhdeenna indho la'aan. Waxaan leenahay indho laakiin ma aragno; dhegaha, laakiin ma maqalno. Waxaan adduunka ku dhex safreynaa oo u sheegaynaa Ummad kasta inay geysanayaan xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha ayna tahay inay la mid noqdaan “Dimuqraadiyadda Mareykanka” “Maamulaha Dunida Xorta ah” iyo “Kaliya Koobka Adduunka”. Halkan waxa loogu yeero "Mareykanka", waxaan nafteena u sheegeynaa haddii aan ku jiri lahayn Naasigii Jarmalka, waxaan ku sameyn lahayn wax ka duwan. Indho la’aantaani waa mid dhaafsiisan qalbi jabka iyo naf jabka. Waxay beenineysaa runta aan laga doodi karin in xasuuqii Naasiyiinta loo ekeysiiyey xatooyada, kufsiga, dhaca, xasuuqa, iyo addoonsiga dadka asaliga ah ee Ameerika iyo dadka Afrikaanka ah ee laga ganacsado ee la keenay waxa loogu yeero Mareykanka laguna qasbay addoonsiga.
Maaha wax kadis ah in duufaannada jeexjeexaya dalkan ay raacaan isla dariiqii maydadkii lagu tuuray dusha sare ee dhiig u huridda Ilaahey Lacag. Hay'adaha Ashanti, Ibo, iyo Yoruba ayaa noqday badweynta, Ameerika. Meel kasta oo aan ka istaagno Jasiiradda Turtle, waxaa jira meydad xasuuqii ugu xumaa iyo ecocide ee taariikhda Dhulka hoostiisa lagu aasay. Holocaust-kani ma aha taariikh oo keliya, mana aha wax uun sooyaalkeenna soo dhaafay. Waxay kusii socotaa ilaa maanta. Waxa loogu yeero “Mareykanka,” dad badan ayaa indho u leh inay arkaan Nazi-guurinta Jarmalka ee dib u dejinta, xarigga, shaqo gelinta, addoonsiga qasabka ah, geettoxin, isir sifeyn iyo olole dabar goynta jumlada ah ee dadka ay u arkeen “kuwa kale” ee ku saleysan jinsiyadda, diinta, naafonimada , iyo kala duwanaansho kale. Naasigii Jarmalka wuxuu ugu yeeray ololahaas "Hantiwadaagnimadii Qaranka" iyo "Xalkii Ugu Dambeeyay". Waa mid ka mid ah wasakhda ugu xun taariikhda aadanaha. Waxa loogu yeero Ameerika, dadka badankood ma lahan indho ay ku arkaan dib u dejinta qasabka ah, xarigga, shaqo gelinta, addoonsiga qasabka ah, geeto u gaar ah, isir sifeyn iyo olole dabar goynta ah ee dadka gobolka gumeysiga iyo xulafadiisa ay tixgeliyaan “mid kale” oo ku saleysan isir, diinta, awooda, iyo kala duwanaanshaha kale, in kasta oo ay taasi socoto. Calaamadeynta iyo magacyada mashruucyadan xasuuqa ah ayaa ka duwan. Shuruudaha waxaa loo isticmaalaa sida "Aayaha Cad", "Suuqa Bilaashka ah." "Horumar / Gentrification," ama xitaa "Communism" ama "Dimuqraadiyad".
Naasiyiintu waxay ugu yeereen kaabayaashooda inay xidhaan oo ay baabi'iyaan “cadowgooda gobolka”:
"Xeryaha Isku-uruurinta". Waxa loogu yeero "Mareykanka", kuwa awoodda hayaa hadda waxay ugu yeeraan hay'adahaas: "Xarumaha Toosinta," "Xarumaha Dadka Lagu Hayo," "Isbitaalada Caafimaadka Maskaxda," "Ghettos," iyo "Boos celinta".
Kani waa Orwellian Double-Speak. Waxaan baranayna xabsiga kuhadal. Xasuuqa madow, bunni, asal ahaan, cadaan, danyar, magaal, reer miyi, dadka ay la soo gudboonaatay naafonimo, dadka ay la soo gudboonaatay hoy la aan, Dadka la soo daristay xaalado miyir doorsoon, Dadka la kulma ku sumowga opiates, khamriga, ama daroogooyinka kale, odayaashayada, Carruurta, Ehelka Xayawaanka, Dhulka naftiisa, qof walba wuxuu u arkaa "kale" ama "wax la tuuri karo" "shay" in lagu "xukumo" ama "lagu haysto" waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin cadowga gobolka.
Sidoo kale sidoo kale dhamaantiin kuwa ka soo horjeedda xukunkaas iyo dulmigaas oo la garab istaagaya masaakiinta iyo dulmaneyaasha raadinta caddaaladda iyo adduunka wanaagsan ee aan ognahay inay suurtagal tahay. Ruuxan cudurka iyo cudurada wadnaha ee ku dhowaad dhammaanba ku faafa waxa loogu yeero "Mareykanka" (iyo in badan oo adduunka intiisa kale ah) ayaa qaabab badan leh. Xididkiisu waa aaminaadda qofku ka sarreeyo, mid kale oo liidata, oo markaa ay xaq u leeyihiin inay xukumaan. Waxaan ku aragnay muuqaalkan dhammaan dulmiga dulmiga. Markii cudurkan ruuxiga ah, aafada xiriirka ah la aqoonsado, marka qofku fiiriyo milicsigooda muraayadda, ama biyaha dhexdiisa, oo uu arko waxa bini'aadamnimadu noqotay iyo waxa loo oggolaaday in lagu sameeyo magaceena, uur-ku-taaggu ikhtiyaar uma aha. Ficil u qaadista jacaylka, rajada, caddaaladda cimilada, xorriyadda dadka oo dhan, ilaalinta biyaha iyo jiilalka mustaqbalka, in la difaaco muqadaska - nolosha oo dhan - maahan raaxo, ee waa sida aan nafteenna u bogsanno uguna badbaado.
COVID-19 ayaa si xawli ah ugu sii kordhaya xasuuqan loo geysanayo Ummadaha Asaliga ah, Madowga, Saboolka, iyo “kuwa kale” ee adduunka oo dhan. In kabadan 600,000 oo dhimasho ah ayaa horeyba uga dhacay "Mareykanka" COVID-19 awgood. In ka badan afar milyan oo qof ayaa lagu diley adduunka oo dhan, tirada dhimashaduna weli way sii kordheysaa.
Isla mar ahaantaana, fashiistayaashu waxay kordhiyeen weeraradooda argaggixiso, iyo xasuuqyada kale, waxay gawaaridooda si ula kac ah ugu kaxeeyeen isu imaatinnada Dadka Asaliga ah, Mudaaharaadayaasha Nolosha Madoow, iyo kuwa kale oo isu soo uruurinaya si loo ilaaliyo Dhulka, Biyaha, iyo Dadkiisa. Inbadan oo naga mid ah waxay xanbaarsan yihiin dhaawacyo qoto dheer iyo dhaawac ka soo gaaray markhaati ka noqoshada falalkan iyo kuwa kale ee macno darrada ah ee deggenayaasha-gumeystaha, argagixisada-cad-ceebta. Marar dhif ah ma jiraan wax la xisaabtan ah oo ku saabsan kuwa geysta. Gobollada qaarna xitaa waxay meel mariyeen qawaaniinta gobolka oo dhan inay cunaqabateeyaan iskuna dayaan inay sharci ka dhigaan falalkan argaggixiso ee argagax leh ee dilka baabuurta.
Heather Heyer, Summer Taylor, Robert Forbes, Deonia Marie, Andrew Joseph III. Iyo si ballaaran: Oscar Grant, Michael Brown, Breonna Taylor, George Floyd, Rekia Boyd, Eric Garner, Emmett Till, Medgar Evers, Karen Smith, Syd Eastman, Meg Perry. Waxaan haynaa xusuusta oo aan wadnaa magacyada kuwa badan oo aan ku weynay intaan jidka ku sii jirnay, waxayna ku sii jiraan annaga iyo halgankeenna.
Dagaalkii Hindida iyo Addoommadii ka soo horjeeday Jasiiradda Turtle weligood ma dhammaan. Sidii qarniyadii ka horreeyayba, maaddooyinka deggena-gumaysiga loogu riixo xadka, ama lagu xaddido shaqo aan macno lahayn oo ka jira xafiis dowladeed ama xafiisyo aan faa'iido doon ahayn ama jir iyo naf burburinaysa bakhaarrada amazon, ama soo qaadashada cudbi, yaanyo, ama tubaakada iyo mararka qaarkood, la kulma addoonsiga casriga ah ee maalinlaha ah sida shaqaalaha dhididka nugul, shaqaalaha beeraleyda ah ee muhaajiriinta ah, iyo maxaabiista habeenkii lagu xayiray laguna qasbay inay shaqeeyaan waxyar oo lacag la'aan ah maalintii. Haweenka asaliga ah waa "la waayey" waana la dilay. Carruurta asaliga ah ayaa laga xaday oo lagu dilay iskuulada gumaysiga. Hadda waxaa la joogaa xilligii aan ka tanaasuli lahayn dhaxalkeennii xumaa ee aan ka dhalannay dhulka la xaday oo aan ku biirno sidii aan uga qayb qaadan lahayn difaaca muqaddas.
Mar labaad, Zapatistas waxay ina barayaan cashar lama ilaawaan ah: inaan ku jirno dagaalkii Afaraad ee Adduunka. Dagaalkii Qaboobaa ka dib, shuuciyaddii neoliberalka iyo gumeysigii neoliberal-ka ayaa indhahoodii u weeciyay bani'aadamnimada waxayna isku dayayeen inay dhammaystiraan mashruucoodii xukunka.
Laakiin meel kasta waxaa ka jira iska caabin. Waxaan dhamaanteen ku suganahay dhul muqadas ah. Goob kasta oo muqaddas ah waa goob lagu dagaallamo qalbiga iyo ruuxa. Buuraha, webiyada, jardiinooyinka, jidadka, goobaha cibaadada, guryaha dadka, xeryaha dhuumaha, xitaa dhexdeenna; kuwan dhammaantood waa goobo lagu dagaallamo.
Ruxitaanka silsiladaha dulmiga waxaa ka mid ah dadka jinsi kasta ha ahaadeene, jinsi, jinsiyado, karti, iyo da 'kasta. Kaqeybgalayaashu waa midab kasta oo qaanso roobaad ah, waxayna ku kalawareegaan juqraafiyo kaladuwan iyo jahwareer siyaasadeed.
Gargaarka is-kaashu waa tilmaan bixin hagitaan ah. Naga caawinta wadada aan ugu laabaneyno dadnimadeena. Waxay ku saabsan tahay badbaadin nafteena, ma ahan kuwa kale ee la dulmay. Waxaan haynaa xoogaa dad ah oo dib loo soo toosin karo.
Caawinta wadajirka ah iyo daryeelka wadajirka ahi waxay kahortag u tahay sunta maskaxda iyo xabsiga shisheeyaha, go'doominta, luminta xiriirada bulshada ee saxda ah, sunta dhulka, badda, iyo cirka, iyo hoy la'aanta deegaanka iyo xiriirka ku xeeran. Waa fure fura albaabka xiran.
Abaabulka bulshada ee iscaawinta iyo wadajirka ayaa ka sameysmay kuna koray meelo fara badan intii coronavirus-ka cusub ku faafay.
Qaarad ilaa qaarad, dadku waxay ikhtiraaceen oo ay dhexmareen iyagoo adeegsanaya xakamaynta macluumaadka, ku filnaanshaha dowladnimada iyo u diyaargarow la'aanta, isku dayga lagu xakameynayo madax-bannaanida adduunka, iyo sidoo kale sahayda la'aanta dhaqaalaha-argagaxa halka suuqa saamiyada uu burburay.
Maxaabiista waxaa lagu qasbay inay shaqeeyaan waxyar oo lacag la'aan ah si ay u sameeyaan waji-waji, nadiifiyaha gacmaha, iyo agab kale. Isla mar ahaantaana, xabsiyada, jeelasha, dhirta hilibka lagu gurayo, xarumaha dadka lagu hayo, iyo xarumaha lagu hayo caruurta ayaa ahaa kiciyaasha cudurka iyo ka tagida caafimaad ee baahsan, taas oo keentay in dad aan la qiyaasi karin oo la kulma addoonsiga casriga ah ay naftooda ku waayaan.
Kuwo badan oo xilal awoodeed ah ayaa si joogto ah u qabanayey shaqadooda ah inay xalaaleeyaan jagooyinkooda iyaga oo ugu wacan gobolka iyo caasimadda jawaab celin la'aanta iyo dhibaatada adag ee coronavirus. Cudurrada siyaasadeed iyo dhaqan ee shisheeyaha neceb, cunsuriyadda, iyo karti-wadaagga ka dhex muuqda astaamaha kale ee xukunka ayaa la muujiyay. Ka mid noqoshada macluumaadka caafimaadka bulshada, oo si tartiib tartiib ah ugu sii kordhaya khadka tooska ah iyo ka shaqeynta bulshada dhexdeeda waxay noqotay daawo looga hortago oo muhiim u ah amniga bulshadayada iyo caafimaadka bulshada. Sidoo kale sidoo kale, yeela cilaaqaadka innaga isku xidha midba midka kale.
Gobolka iyo suuqa ayaa hoos u dhigay dhibaatada isla markaana iska indhatiray baahida dadka. Jawaab ahaan, oo ka soo kordheysa xididdo qoto dheer, waxaa soo ifbaxay soo bixitaan qurxoon iyo ubax bulsheed caawinaad wada jir ah si loo gaarsiiyo sahayda dadka aan isqancin, wehelinta odayaasha iyo dadka kale ee dareemay amni darada sababo la xiriira kororka dambiyada nacaybka, abaabulka heer waddo ee xaafadaha adduunka oo bixiya taageero caafimaad, dhismaha saldhigyo gacmaha lagu dhaqo, wadaagista cuntada iyo biyaha deriska, iyo ka-hor-tagga xaaqyada dadka la soo deristay hoy la'aanta. Dadka ku hawlan gargaarka is-kaashka ayaa ururiyey ilo waxayna kala shaandheeyeen heerarka tirada badan ee macluumaadka soo galaya maalinba maalinta ka dambeysa si ay gacan uga geystaan ​​taageerada caafimaadka bulshada iyada oo aan la kulannay dariiqooyinka cusub ee cusub ee layaabka leh ee masiibada adduunka ay ku hakin karto nidaamka, u sababi karto masiibo, ayna uga tagi karto bulshada saameynta ku leh. si aan isugu kalifno nafteenna iyo midkeenba midka kale. Laakiin, sida ay ku yiraahdaan Boriken, "Solo el pueblo, salva al pueblo". "Dadka kaliya ayaa badbaadiya dadka".
Shabakadaha gargaarka is-kaashatada ayaa sameysmay oo koray si ay nooga dhigto mid aamin ah oo la daryeelay, sida ugu macquulsan, waxa runti ah waqtiyada khatarta ah Erayada Audre Lorde ayaa inaga dhex guuxaya, "Marnaba looma jeedin inaan sii noolaano." Markii madaxdu (ama saboolnimadu) nagu qasbeen inaan shaqada nimaadno annagoo jiran ama aan nafteenna iyo kuwa qoyskeenaba khatar gelinno, shaqadan mushaharka qaata waxay u muuqatay sidii addoonnimo la soo galiyay. Waxay muujisay baahida loo qabo isbadal aasaasi ah oo lagu sameeyo nidaamyadeena dhaqaale iyo siyaasadeed. Iyo talaalka midab kala sooca, oo taajiriinta iyo kuwa awooda leh ay ku heli karaan talaalada nafaha lagu badbaadiyo iyo dadka ku nool koonfurta aduunka oo loo diiday helitaankooda, waxay banaanka soo dhigeen is burinta xasuuqa siyaasada aduunka.
Wadajirka xagjirka ah ee gees kasta oo adduunka ah wuxuu sii wadaa jawaab celin naxariis iyo wargelin leh oo ah COVID-19 si loo dhiso marin u helka, ilaha, iyo awooda dadka oo dhan meelaha oo dhan. Dadka adduunku waxay ka qaylinayaan meelaha ugu hooseeya ee dhexdooda ku yaal oo aan "caadi ku soo noqon". Waxaan rabnaa inaan ku noqono wadankeena. Meesha qalbigu joogo. Meesha aan xiriir sax ah ku leenahay midba midka kale, nafteena, Dhulka, iyo noolaha oo dhan.
Neoliberal Capitalism, Dejiye-Gumeysi, iyo Dowladdu waxay ahaayeen welina sii wadaan inay nolosha u hanjabaan sidaan ognahay. Waxaan joognaa isgoys: hal wado waa baabi'in, mida kalena waa xorayn. Malik Rahim, odaygii Black Panther ee inbadan oo naga mid ah ku soo kordhiyay Gargaarka Musiibada ee Mucaawinada noocan ah abaabulka, wuxuu had iyo jeer noo sheegay in jiilkeenna loo aqoon doono jiilkii ugu weynaa ee badbaadiya nolosha sida aan ognahay, ama jiilka ugu habaarka badan taasi oo lunsatay nolosha meerahan sidaan ognahay. Kuwa aan wax ka baran waxyaabihii la soo dhaafay waxaa lagu xukumay inay ku celiyaan, laakiin kuwa abuura mustaqbalka waa kuwa arki kara. "Suuqa xorta ah" ee aan waxba ka jirin waa Orwellian Double-Speak. Suuqa xorta ah ee dhabta ah ee aan dooneyno inaan ku noolaano waxaa ka mid ah wadaagida badeecadaha, adeegyada, awooda, wax walba, si xor ah oo aan laheyn xayiraad, gabi ahaanba ka baxsan xayiraadaha dulmiga ah ee Lacagta iyo Awooda. Gabayaaga Andrea Gibson, wuxuu yidhi, "Waxaan baran doonaa inta aan haysano, markaan baranno inaan siino shikadaas."
Baadhitaanku waa awooddeena. Waxaan ku dhaqaaqeynaa xawaaraha kalsoonida iyo xawaaraha riyada. Ku dhaqaaqida xawaaraha kalsoonida waxay ina xusuusineysaa inaan midba midka kale maal gashano, inaan xasuusnaano, oo aan waqti qaadano si aan u horumarino isku xirnaanta ka xoog badan masiibo kasta oo xoogga leh ee nala dul dhigo. Si qoto dheer xusuustaada ugu xardho kuwa kula jooga adiga daqiiqadaha qarsoodiga ah ee biriijyada, marka aad ku baraarugto dareenka suurtagalnimada iyo karaamada.
Raadinta midba midka kale waa ficil kacaan, waana aasaaska ay ka soo baxaan dhammaan ficilada kale ee kacaan ahaaneed. Isla mar ahaantaana, waxaan ku riyoonnaa. Mar alla markii aan bilowno inaan ka baxno xabsi gumeysi maskaxdeena ah, oo aan xasuusano inaan si xor ah u fikirno, ku riyoonno weyn, oo aan madaxa, qalbiga, gacmaha iyo cagaha u dhigno si aan ugu shaqeyno u adeegida riyadaas iyo male awaalkaas, si xawli ah ayey u koraan. Wax walba waxay ku bilaabmaan fikrad ahaan, waa uun fikrad yar. Iyo xawaaraha riyada, iyada oo loo marayo qaab sixir ah haddii aad rabto, boqortooyooyinku way dhacaan, addoonsiga waa la joojiyaa dhaqdhaqaaqyaduna waxay yeeshaan qaab iyo duulimaad. Khatarta ugu weyn ee Awoodda ma ahan inaan awoodda ku qabsanno gacan ka hadal ama qaabab kale. Khatarta dhabta ah ee Awoodda ayaa ah annaga oo u jabinayno keli ahaantooda ah abuurista - jebinta kali ahaantooda ah foorarsiga xaqiiqda ilaa doonista.
Mid kamid ah howlaheena qarsoodiga ah ayaa had iyo jeer ahaa inuu meesha ka saaro dhalanteedka awood darrida dadku dareemaan. Si dadka loo siiyo aragti ah in Awooddu ay jilicsan tahay. Sii dadka khibradaha ku saabsan beddelka xaqiiqda. In dadka la tuso waxa kaliya ee kuwa awoodda ku hayaa jagadaas waa dhalanteed aan awood lahayn. Gobolku waa tiyaatar-dawladeed, oo ka buuxa buuq iyo duruufo, oo aan waxba tilmaamayn. Mar haddii aan annaga, dadka, fahamno nidaamkan, waxaan sameyn karnaa xulashada inaan ka midnoqno qaxidda Boqortooyada. Dhamaan jadwalada iyo juquraafi ahaan, waxaa jiray dad geesiyiin ah oo iska caabiyey Lacagta iyo Awoodda. Waxaa sidoo kale jiray tusaalooyin aan la soo koobi karin oo ah dad xitaa markii ay ku hoos jireen sixirka Lacagta iyo Awoodda, ay ka soo tooseen, kana jeesteen xoogagii xukunka iyo cabudhinta, iyaga oo u daneynaya bulshada, cadaaladda, iyo is daryeelida midkood oo raadinaya jawi cusub, adduunka ugu fiican ee aan wada ognahay waa suurtagal.
Ma adag tahay in laga baxo mugdiga dhammaystiran, illaa iftiinka iftiinka? Haa dabcan. Miyaan turunturoon doonnaa markii cagahayaga aannu helno? Xaqiiqdii. Laakiin waxaan la wadnaa fahamka inbadan oo inagahoreysay ay soo mareen isbadal la mid ah iyo dib u dhalasho.
Mustaqbalka, halkan laga bilaabo, lama qorin. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad nala qorto.
Awoodda oo dhan dadka.
Dhamaan awooda ilaa mala awaalka.
Wax walba oo loogu talagalay qof walba, waxba nafsadeena.
2021-07-11T13:36:06-04:00July 11th, 2021|updates|